नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : धेरै पछि सुन्न पाइएको एउटा शुभ समाचार !
धेरै पछि सुन्न पाइएको एउटा शुभ समाचार !
विप्लवले पनि प्रचण्ड र बाबुरामले विगतमा दिएको जस्तो धोखा नदिउन्, हात हतियार खोलाले नबगाउन । सरकारले पनि इमान्दारिता पूर्वक वार्तामा भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्दै विप्लव समूह लाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर देश प्रतिको कर्तव्य निर्वाह गरोस् । देशमा शान्ति छाओस्, हरेक नेपालीले शान्ति पूर्वक बाँच्न र आफ्नै माटोमा गरिखान पाओस्, रातमा मस्त निदाओस् । विप्लव समूह र सरकार बिच भएको यो समझदारी पछि फेरी अर्को कुनै समूह जङ्गलमा नजन्मियोस् । वार्ता र समझदारी प्रति सकारात्मक हुँदै, खुसी व्यक्त गर्दै दुवै पक्षलाई इमान्दारी पूर्वक अगाडि बढ्न, देश र जनताको लागि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन विनम्रता पूर्वक आग्रह र हार्दिक शुभकामना । प्रचण्ड बाबुराम नामका देशका महा खलनायकहरू सरकार र विप्लव समूह बिच वार्ता नहोस्, भए पनि वार्ता भाँडियोस् भनेर जसरी लागेका थिए, उनीहरू असफल भएका छन् र उनीहरू सदाका लागि असफल होउन् । नेपाली नेपाली बिचको एकता, सद्भाव कायम रहोस् हाम्रो यही शुभेच्छा छ ।
उहाँले शान्तिका लागि भएको सरकारको पछिल्लो प्रयासले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकोसमेत बताउनुभयो । आज बिहान मात्रै सरकारी वार्ता टोली र चन्द समूहको वार्ता टोलीबीच तीनबुँदे समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द समूहकोतर्फबाट वार्ता टोली संयोजक एवं प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
उता सरकार र विप्लव समूहबीच ३ बुँदे सहमति भएपछि गृह मन्त्रालयले हिरासतमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई छाड्न परिपत्र जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दामा प्रक्रिया पु¥याएर छाड्न निर्देशन दिएको गृहमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार शुक्रबारसम्म उक्त समूहका उपल्ला नेताहरुमा धर्मेन्द्र बास्तोला, वीरजंग चन्द, ओम पुन र माइला लामालगायतलाई छाड्ने तयारी रहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयोे, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दामा प्रक्रिया पु¥याएर छाड्न आजै निर्देशन भइसकेको छ, शुक्रबार सम्ममा चारजना नेतालगायत छाड्ने तयारी छ, अन्यको हकमा सहजीकरण हुन्छ, अन्य उपल्ला नेतालगायतहरु सबै अहिले नै छोड्ने भन्ने नहोला, अदालतमा विचाराधीन भएको हकमा सहजीकरण हुन्छ ।’